के एन ९५ मास्कले कुकुरलाई विकिरणबाट जोगाउन सक्छ: न्यूक्लियर सर्वाइभल - गुड एयर टोलीद्वारा K95 मास्क
1950-1980 को बीचमा आणविक बम परीक्षणको युगमा कुकुरहरूलाई प्रयोगशाला विषयको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, विशेष गरी विकिरणमा आकस्मिक मानव व्यवसायिक जोखिमको अपेक्षित प्रभावहरूको बारेमा डेटा सिर्जना गर्न प्रयोग गरिने अध्ययनहरूमा।
अध्ययन 1940 को दशकको उत्तरार्धमा विकिरणसँग काम गर्ने मानिसहरूको लागि सुरक्षा दिशानिर्देशहरू निर्धारण गर्न कुकुरहरूमा आयनाइजेसन विकिरण एक्सपोजरको प्रभावहरूमा धेरै हदसम्म प्रारम्भ गरिएको थियो र आज जीवविज्ञानीहरूको लागि सान्दर्भिक छ। घरेलु कुकुर कृन्तकहरूको तुलनामा तिनीहरूको ठूलो शरीरको आकार र लामो आयु, साथै तिनीहरूको व्यापक उपलब्धताको कारणले विकिरण अनुसन्धानको लागि छनोट गरिएको थियो।
कुकुरहरूमा विकिरण एक्सपोजरको बारम्बार प्रभावहरूमा हेमेटोलोजिकल परिवर्तनहरू, बाँझोपन, र हड्डी, कलेजो, फोक्सो र रगतको क्यान्सर, अरूहरू बीचमा समावेश छन्। प्रभावहरू रेडियोन्यूक्लाइड, एक्सपोजरको विधि, एक्सपोजरको उमेर, खुराक दर, र कुल एक्सपोजर खुराकमा निर्भर गर्दछ।
रेडियोन्युक्लाइड्सको जोखिमको सबैभन्दा सम्भावित मार्ग सास फेर्न मानिन्छ, अनुसन्धानकर्ताहरूले पशु अध्ययनहरूमा एक्सपोजरको यो मोडलाई लागू गर्न नेतृत्व गर्दछ। रेडोन प्राकृतिक रूपमा हुने रेडियोन्यूक्लाइड हो जुन घरहरूमा प्रायः भेटिन्छ, र मानिसहरूमा सिगरेट धूम्रपान पछि फोक्सोको क्यान्सरको दोस्रो प्रमुख कारण मानिन्छ।
घरहरू भित्र रेडोन स्तरहरू स्थानीय माटो वा चट्टानको आधारमा भिन्न हुन्छन् र निर्माण सामग्रीबाट पनि उत्सर्जन गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक रूपमा हुने सामग्रीहरूसँग काम गर्नेहरू जुन रेडोन स्तरमा उच्च हुन्छन्, जस्तै यूरेनियम खानीहरू, हानिकारक जोखिमको लागि विशेष रूपमा उच्च जोखिममा छन्। प्रारम्भमा, अर्गोन राष्ट्रिय प्रयोगशालामा मानवहरूमा रेडोन अध्ययनहरू सञ्चालन गरिएको थियो, यद्यपि यी अध्ययनहरूमा सीमित संख्यामा सहभागीहरू समावेश थिए र रेडोन एक्सपोजरको शारीरिक प्रभावहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेनन्। यसको सट्टा, अन्वेषकहरूले वातावरणमा अवशोषित रेडोन र एक्सपोजर पछि रेडियम क्षयको परिणामको रूपमा शरीरमा उत्पादन हुने रेडोन बीच भिन्नता खोज्न खोजे।
धेरै अध्ययनहरूले कुकुरहरूमा रेडोन इनहेलेसन एक्सपोजरको प्रभावहरूको अनुसन्धान गरे, श्वासप्रश्वासको समस्या र एक्सपोजर पछि श्वासप्रश्वास नलिका ट्यूमरहरू रिपोर्ट गर्ने। रेडोन, रेडन छोरीहरू, युरेनियम अयस्कको धुलो, र/वा सिगरेटको धुवाँको सम्पर्कमा आउने कुकुरहरूमा ५० महिनाको एक्सपोजर पछि पल्मोनरी ट्युमरहरू भेटिए। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, 50 कुकुरहरू मध्ये 19 मा रेडोन, रेडोन, र युरेनियम अयस्कको धुलो दैनिक रूपमा श्वासप्रश्वास नलिका ट्युमरहरू विकसित हुन्छन् जबकि 19 कुकुरहरू मध्ये केवल दुईमा रेडोन, रेडोन, युरेनियम अयस्कको धुलो र सिगरेटको धुवाँले दैनिक रूपमा श्वासप्रश्वास नलिका ट्युमर विकास गर्दछ। अन्वेषकहरूले सुझाव दिन्छन् कि यो सिगरेट धूम्रपानको परिणामको रूपमा बढेको म्यूकस उत्पादन वा निकासीसँग सम्बन्धित हुन सक्छ, जसले ब्रोन्कियल र ब्रोन्कियोलर फैलाउने एपिथेलियल कोशिकाहरूमा सानो विकिरण खुराक निम्त्याउँछ।
27 अध्ययनहरूमा कुकुरहरूलाई उजागर गरिएको थियो 239पु, 238पु, 144Ce, 90श्री, 90Y, 91Y, 241am, Rn वा U साँस लिने एरोसोलहरू द्वारा रेडियोन्यूक्लाइडहरू समावेश गर्दछ। फोक्सोको ट्यूमर र श्वासप्रश्वासको क्षति सामान्य हानिकारक परिणामहरू थिए र एक्सपोजरको यो विधिको लागि अद्वितीय थिए। विकिरण निमोनाइटिस, विकिरण एक्सपोजरको कारणले फोक्सोको सूजन, प्रमुख गैर-नियोप्लास्टिक रोग थियो।
फोक्सोमा छोटो अवधारण पछि, केही रेडियोन्युक्लाइडहरू कुकुरको सम्पूर्ण शरीरमा स्थानान्तरण गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, जसले निक्षेप र लामो एक्सपोजरसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रभावहरू निम्त्याउँछ। प्रारम्भिक एक्सपोजर पछि रेडियोन्युक्लाइड्सको स्थानान्तरणले सम्भवतः तत्काल मात्र नभई ढिलाइ हुने प्रभावहरू पनि निम्त्याउँछ, पुरानो एक्सपोजरले प्रारम्भिक एक्सपोजर पछि अङ्ग र तन्तुहरूमा निरन्तर उच्च खुराक उत्पादन गर्दछ।
उदाहरणका लागि, एक्सपोजर पछि एक वर्ष 238पु, कुकुरहरूको कलेजो र कंकालमा रिटेन्सन निरन्तर रहन्छ र एक्सपोजर पछि 1000 दिन पछि पनि अवस्थित छ। तुलना गरेर, 2391192 दिनको औसत अनुमानित आधा-समयको साथ एक्सपोजर व्यक्तिहरूको फोक्सोबाट पु सफा हुन्छ, र एक्सपोजरको 10 वर्ष भन्दा बढी पछि समग्र शरीरको अन्तिम बोझको 65% थोरैसिक लिम्फ नोडहरूमा फेला पर्यो।। विलम्बित ट्यूमर गठन लगातार रेडियोन्यूक्लाइड एक्सपोजर बिना पनि हुन्छ।
मृत्युको प्रमुख कारण कुकुरहरूको दुई अलग-अलग अध्ययनमा रिपोर्ट गरिएको छ कि एकल सास फेर्न पर्दा 238पु एरोसोलहरू हड्डीका ट्यूमरहरू थिए, त्यसपछि फोक्सो र कलेजोको ट्युमरहरू थिए, ती सबै लगभग3वर्ष पछि देखा पर्यो।. 144Ce लाई उस्तै गरी खुला कुकुरहरूको कलेजो र कंकालमा स्थानान्तरण गरियो, जहाँ कलेजो र हड्डीको ट्युमरको पछिल्ला घटनाहरू उल्लेख गरिएको थियो।। लामो समय सम्म सास लिने को अवधारण 90लामो समयसम्म एक्सपोजरमा निम्त्याउने खुला कुकुरहरूको कंकालमा Sr सबैभन्दा उच्च थियो। नतिजाको रूपमा, खुला कुकुरहरूको 47% प्राथमिक हड्डी ट्यूमरको सामना गर्यो।
कुकुर र विकिरणको बारेमा अध्ययनहरूले के प्रकट गर्छ?
के विकिरणबाट जोगाउन N95 मास्क प्रयोग गर्न सकिन्छ?
N95 मास्कहरू धुवाँ, खरानी, ​​एलर्जी, ब्याक्टेरिया र मोल्ड जस्ता चीजहरूबाट जोगाउन डिजाइन गरिएको हो। सुसमाचार यो हो कि तिनीहरू हावामा रेडियोएक्टिभ कणहरूको इनहेलेसन कम गर्न सक्षम छन्। सुरक्षा, तथापि, सीमित छ किनभने यो कुकुरहरूले आफ्नो शरीरमा रेडियोधर्मी पदार्थहरू अवशोषित गर्ने तरिकाहरू मध्ये एक मात्र हो। तिनीहरूले यसलाई छाला, आँखा र इन्जेसन मार्फत पनि अवशोषित गर्छन्।
अल्फा, बीटा र गामा विकिरण बीच के भिन्नता छ?
एयर फिल्टर मास्कले अल्फा र बीटा विकिरणबाट केही सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसले तपाईंलाई गामा विकिरणबाट जोगाउँदैन। एआईआर फिल्टर मास्क आणविक विस्फोट पछि रेडियोएक्टिभ फलआउट इनहेल गर्नबाट रोक्न उपयोगी छ।
ग्यास मास्कले विकिरणबाट कसरी सुरक्षा गर्छ?
दुई प्रकारको विकिरण जसले लगाउने कारण हुन्छ एयर फिल्टर मास्क अल्फा र बीटा कणहरू हुन्। यी दुवै प्रकारका रेडियोएक्टिभ कणहरू सजिलै ग्यास मास्कद्वारा रोकिन्छन्।
अल्फा विकिरण एक कम ऊर्जा कण हो जसले चाँडै ऊर्जा गुमाउँछ किनभने यो यसको स्रोतबाट यात्रा गर्दछ। यो एक इन्च भन्दा अलि बढी हावा, धेरै सानो मात्रामा पानी (.008″) र अखण्ड छालाबाट रोक्न सक्षम छ।
अल्फा द्वारा उत्पन्न मुख्य समस्या तब हुन्छ जब तपाइँ यसलाई उत्सर्जन गर्ने सामग्री सास फेर्नुहुन्छ। तपाईंको छालाले अल्फालाई रोक्न सक्छ जब यो तपाईंको शरीर बाहिर हुन्छ, तर तपाईंको आन्तरिक अंगहरूले उही कुरा गर्न सक्षम छैनन्। यसले अल्फा कणहरूलाई तपाइँको शरीरलाई भित्रबाट विकिरण गर्न अनुमति दिन्छ जब तपाइँ यसलाई सास फेर्नुभयो।
बीटा विकिरण अर्को अपेक्षाकृत कम ऊर्जा कण हो। यसलाई 10′ हावा, 2″ पानी, धातु वा गिलासको पातलो तह र भारी कपडाले रोकेको छ।
बीटा विकिरणको खतराहरू अल्फासँग धेरै समान छन्। जब तपाइँ यसलाई सास फेर्नुहुन्छ, तपाइँसँग हुन सक्ने कुनै पनि बाह्य सुरक्षा समाप्त हुन्छ र तपाइँ सीधै तपाइँको फोक्सो र अन्य अंगहरु लाई विकिरण गर्दै हुनुहुन्छ।
An एयर फिल्टर मास्क हावाबाट कुनै पनि दूषित ठोस पदार्थहरू फिल्टर गर्नेछ। यसले तपाईंलाई कुनै पनि अल्फा वा बीटा कणहरू सास फेर्नबाट पनि बचाउनेछ। फुल-फेस रेस्पिरेटरको बेवास्ता गरिएको फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि यसले तपाईंको आँखालाई समान सामग्रीबाट सुरक्षित राख्छ!
के एयर फिल्टर मास्कले गामा विकिरणबाट जोगाउँछ?
यदि तपाईं गामा विकिरणबाट आफूलाई बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले पहिरन लगाउनु बाहेक अरू केही गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। एयर फिल्टर मास्क। यसले तपाईंलाई गामा विकिरणबाट बचाउँदैन।
गामा विकिरण एक धेरै उच्च ऊर्जा कण हो (एक्स-रे जस्तै) जसलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण ढाल आवश्यक छ। बाक्लो र सघन सामग्री तपाईले राम्रो पछि पाउन सक्नुहुन्छ। गामा विकिरण रोक्न यसले लगभग 14″ पानी, 6.6′ फिट कंक्रीट वा 1.3′ लिड लिन्छ।
यसको मतलब यो हो कि गामालाई तपाईलाई असर गर्नबाट जोगाउने एक मात्र तरिका स्रोतबाट सकेसम्म टाढा जानु हो। यदि त्यो सम्भव छैन भने तपाईले भित्र पस्नु पर्छ र तपाई र गामा स्रोतको बीचमा जति धेरै माटो, कंक्रीट र स्टिल राख्नु पर्छ!
आणविक विकिरण फलआउट कत्तिको खराब छ?
परमाणु विष्फोट तब हुन्छ जब पृथ्वी र मलबे वायुमण्डलमा फ्याँक्न जमिनको पर्याप्त नजिक हुन्छ। यो धेरै आणविक विस्फोटहरूमा हुन्छ तर यो सतह वा सतह विस्फोटको समयमा सबैभन्दा खराब हुन्छ।
विस्फोटको नजिकको फलआउट लगभग 30 मिनेटमा पृथ्वीमा फर्किन सुरु हुनेछ। गुरुत्वाकर्षण र वर्षा जस्ता चीजहरूद्वारा पृथ्वीमा फिर्ता नआएसम्म अन्य फलआउटहरू वायुमण्डलमा धेरै लामो समयसम्म निलम्बित रहन सक्छ। जबसम्म यो हुन्छ, फलआउट विस्फोटबाट धेरै टाढा यात्रा गर्न सक्छ।
फलआउटले सबै चीजहरू दूषित गर्नेछ जुन यो अवतरण वा भित्र छ। यसमा बाली र पानीका स्रोतहरू समावेश छन् जसले फलआउट क्षेत्रमा भएका क्षेत्रहरूमा खाना र पानी पाउन गाह्रो बनाउँछ।
विकिरणले शरीरलाई कसरी हानि गर्छ?
अल्फा, बीटा र गामा सबैलाई आयनीकरण विकिरण मानिन्छ। यो विकिरणको प्रकार हो जसले डीएनएलाई कमजोर बनाउँछ र तोड्छ। यो क्षतिले कोशिकाहरूलाई मार्न सक्छ वा तिनीहरूलाई क्यान्सर कोशिकाहरूमा उत्परिवर्तन गर्न पर्याप्त परिवर्तन गर्न सक्छ।
जब कोशिकाहरू प्रारम्भिक रूपमा विकिरणद्वारा क्षतिग्रस्त हुन्छन्, तिनीहरूले विकिरण रोगको रूपमा चिनिने कारण बनाउँछन्। यो तब हुन्छ जब कोशिकाहरू प्रतिकृति बन्न सक्दैनन् र मर्न थाल्छन्। यसले शरीर सुन्निने, कपाल झर्ने र वाकवाकी लाग्ने गर्छ। कोशिकाहरू जो मर्दैनन् ती बिन्दुमा उत्परिवर्तन गर्न सक्छन् जहाँ तिनीहरू क्यान्सर बन्न नियन्त्रण बाहिर पुन: उत्पादन गर्न थाल्छन्।
म कसरी विकिरणको लागि एक्सपोजर सीमित गर्न सक्छु?
रेडियोधर्मी पदार्थको सम्पर्कमा आउनु चिन्ताको विषय हो भने, विकिरणका बाह्य स्रोतहरूबाट एक्सपोजर सीमित गर्ने उत्तम तरिकाहरू निम्न हुन्:
एक्सपोजर समय सीमित;
रेडियोधर्मी सामग्रीबाट दूरी बढाउनुहोस्;
उपयुक्त ढाल प्रयोग गरेर विकिरण रोक्नुहोस्।
रेडियोधर्मी सामग्रीको आन्तरिक जोखिम निम्न द्वारा कम गर्न सकिन्छ:
श्वसन सुरक्षा को उचित प्रयोग;
प्रदूषणको लागि खाना र पानी निगरानी;
अवशोषण र घाउ प्रदूषण रोक्नको लागि उपयुक्त छाला सुरक्षा प्रयोग गर्दै।
व्यक्ति र कुकुरहरू कणहरू, ग्यासहरू वा वाष्पहरूको सम्पर्कबाट रेडियोधर्मी पदार्थहरूसँग सम्पर्कमा आउन सक्छन्। जब ठीकसँग छनोट गरिन्छ, फिट गरिएको हुन्छ र निर्माताको निर्देशन अनुसार प्रयोग गरिन्छ, एयर फिल्टर मास्कहरूले कणहरू सहित वायुजन्य प्रदूषकहरूको जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ तर सबै एक्सपोजरहरू हटाउँदैन। यसबाहेक, एयर फिल्टर मास्कले बीटा र गामा विकिरणको बाह्य स्रोतहरू विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दैन।